News | Muglin
News | Tag: Muglin
रत्ननगर । अविरल वर्षासँगै पहिरो खसेर अवरुद्ध भएको चितवनको नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्ड एकतर्फी सञ्चालनमा आएको छ । पहिरो खसेर मङ्गलबार बिहानदेखि अवरुद्ध भएको उक्त सडक १८ घण्टापछि साँझदेखि एकतर्फी खुलेको प्रहरी नायव उपरीक्षक प्रभुप्रसाद ढकालले जानकारी दिए । उक्त सडकखण्डको चार किलोमा ठूलो पहिरो खसेकाले पन्छाउन समय लागेको हो ।
पहिरोले नारायणगढ–मुग्लिङ सडकखण्ड अवरुद्ध
चितवन । नारायणगढ–मुग्लिङ सडकखण्ड आज बिहानदेखि अवरुद्ध भएको छ । सो सडकखण्डको तीन ठाउँमा पहिरो खसेपछि यातायात सेवा अवरुद्ध भएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार इच्छाकामना गाउँपालिका–६ को कालीखोला, जलवीरे र चारकिलोमा पहिरो खसेको छ । पानी परिरहेकाले पहिरो पन्छाउन नसकिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
पहिरोको कारण अवरुद्ध नारायणगढ–मुग्लिन सडक खुल्यो
चितवन । नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डअन्तर्गत भरतपुर महानगरपालिका–२९ घुमाउनेमा पहिरो पन्छाएपछि सडक सञ्चालनमा आएको छ । गएराति १०ः२५ बजेबाट अवरुद्ध सडक पहिरो पन्छाएपछि आज बिहान ९ः१५ बजेदेखि सञ्चालन भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले जनाएको छ । पहिरो पन्छाएसँगै रोकिएका सवारी साधन आफ्नो गन्तव्यतर्फ लागेका छन् ।
पहिरोको कारण नारायणगढ-मुग्लिन सडक खण्ड अवरुद्ध, पन्छाउने ५ देखि ८ घण्टा लाग्ने
चितवन । नारायणगढ—मुग्लिन सडक खण्डको टोपे खोलामा पुनः पहिरो खस्दा सडक अवरुद्ध भएको छ । इच्छाकामना गाउँपालिका–६ टोपेखोलामा आज बिहान ५ बजे पहिरो खसेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले जनाएको छ । पहिरो पन्छाउन पाँचदेखि आठ घण्टा लाग्ने प्रहरीले जनाएको छ । सडक निर्माणका क्रममा विभिन्न ठाउँमा भित्तो काटिएका कारण ठाउँठाउँमा पहिरो खस्ने गरेको छ ।
चितवन । नारायणगढ–मुग्लिन सडक खण्डमा खसेका दुई ठूला पहिरो पन्छाउन दिनभर लाग्ने भएको छ । सो सडक खण्डको टोपेखोला र कालीखोलामा पहिरो खसेपछि सडक अवरुद्ध छ । नारायणगढ–मुग्लिन सडक आयोजनाका प्रमुख रोहितकुमार बिसुरालका अनुसार थप पहिरो नखसे कम्तीमा दिनको ४ बजेसम्ममा दुईतर्फी सडक सञ्चालन गर्न सकिने छ । सो सडकको टोपे खोलामा बिहान ५ः३० बजे र कालीखोलामा ८ः३० बजे पहिरो खसेको थियो ।
पहिरोले नारायणगढ–मुग्लिङ सडक अवरुद्ध
चितवन,असार २० । चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका वडा नं ६ मा पर्ने नारायणगढ—मुग्लिङ सडकखण्डअन्तर्गत चार किलो र पाँच किलोको बीच टोपेखोलामा पहिरो खस्दा सडक अवरुद्ध भएको छ । आज बिहान अन्दाजी ५ः३० बजेतिर पहिरो खसेको प्रहरीले अनुमान गरेको छ । अन्दाजी ५० मिटरभन्दा लामो पहिरो खसेको छ ।
१२ घण्टापछि नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्ड सञ्चालनमा
चितवन । नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्ड १२ घण्टापछि दुईतर्फीरुपमा सञ्चालनमा आएको छ। सोमबार बिहान ८ बजेदेखि पहिरोका कारण पूर्णरुपमा अबरुद्ध भएको सडक सोमबार साँझ ७ः ५० बजेबाट सञ्चालनमा आएको हो। आइतबार साँझदेखिको लगातारको वर्षाका कारण अवरुद्ध सडक पूर्णरुपमा सञ्चालनमा आएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक वेदप्रसाद गौतमले जानकारी दिए।
नारायणगढ–मुग्लिन सडक खण्डमा फेरि ठूलो पहिरो खस्यो
चितवन । नारायणगढ–मुग्लिन सडक खण्ड अन्तरगत चार किलो भन्ने ठाउँमा ठूलो पहिरो खसेपछि सडक अवरुद्ध भएको छ । बिहान साढे ६ बजे पहिरो खसेपछी सडक पूर्ण रुपले अवरुद्ध भएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यलय चितवनले जनाएको छ । बाटो अवरुद्ध भएपछि अहिले कयौं सवारी साधनहरु बिछ बाटोमै रोकिएका छन ।
मुग्लिङ–नारायणगढ सडकखण्डमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा दुई जनाको ज्यान गयो
काठमाडौं । मुग्लिङ–नारायणगढ सडकखण्डको इच्छाकामना गाँउपालिका ६ मा पर्ने ३ नम्बर पुलमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा २ जनाको मृत्यु भएको छ । बा. ६२ प. ३७०४ नम्बरको मोटरसाइकल पुलमा ठोक्किएर दुर्घटना भएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय चितवनले जानकारी दिएको छ । मोटरसाइकलमा सवार दुईजना युवक पुलबाट करिब २ सय मिटर तल खोलामा खस्दा मृत्यु भएको हो । उनीहरुको सनाखत हुन सकेको छैन् ।